Soomaaliya oo Ethiopia kala hadashay khariidaddii laga saaray – WARSOOR
Soomaaliya oo Ethiopia kala hadashay khariidaddii laga saaray
Muqdisho – (warsoor) – Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay Ethiopia kala hadashay sawirka khariidaddii ay wasaaraddooda arrimaha dibaddu soo daabacday ee markii danbe ay ka saartay website-kooda.
Sawirkan ayaa muujinayey Soomaaliya oo laga saaray khariidadda laguna daray dalka Itoobiya.
Wasiirka Arrimaha dibedda Somalia Ambassador Ahmed Ciise Cawad, ayaa VOA u sheegay in isla markii ay ka warheleen khariidadda la soo daabacay ay xiriir la sameeyen Ethiopia, xiriirkaasi kaddibna Ethiopia ay ka saartay sawirka khariiradda website-kooda.
Wasiirka ayaa sheegay in wasaaradda Arrimaha dibedda Ethiopia ay cudurdaar ka siisay Soomaalia khaladka, sidoo kalena ay wadaan baaritaan la xiriira sababta ay arrintaas ku dhacday.
Wasiir Cawad ayaa VOA u sheegay inay aqbaleen cudur daarka Ethiopia ay arrintaas ka bixisay oo ay aaminsan yihiin in falkaasi aanu ula kac ahayn.
Xigasho: VOA Somalia
Jamhuuriyadda Somaliland Oo Sii Daysay 14 Maxbuus oo lagu qabtay Dagaalkii Tukaraq
Madaxweynaha Soomaaliya oo Ka Soo Laabtay Booqashadiisii Koonfur Afrika